“Akaro Ny Feonao – Fa Tsy Ny Haavon’ny Ranomasina” : Karaiba Sy Ny Andro Manerantany Hoan’ny Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2014 4:37 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 日本語, Deutsch, Français, English
Sary tao amin'ny faritra manodidina ny tilikambon-jiro ao Toco ao amorontsiraka atsinanan'i Trinite. Sary avy amin'i Taran Rampersad, nampiasana tamin'ny alalan'ny CC license.
Nosy ifampizarantsika ny Planeta Tany, andeha hanambatra hery hiarovana azy.
Izany no nolazain'ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana, Ban Ki-Moon nandritra ny fanokafana ny Taona Iraisam-pirenena 2014 Hoan'ny Nosy Madinika sy ny Firenena an-dalam-pandrosoana. Toa zava-dehibe amin'i Karaiba tokoa ny hafatra nataony – tsy noho ny Andro Iraisam-pirenena hoan'ny Tontolo Iainana amin'ity taona (5 Jiona ) ity ihany izay mifantoka amin'ny fiantraikan'ny hafanan'ny toetr'andro ao amin'ireo firenena nosy madinika – fa satria firenena hampiantrano izany koa i Barbada, sisintanim-paritra nahazoany fankatoavana tamin'ny mahalohalaharana azy amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro.
Amin'ny fitazonana ny teny filamatra ofisialy amin'ity taona ity manao hoe “Akaro ny Feonao, Fa Tsy Ny Haavon'ny Ranomasina”, dia nandanjalanja ny olan'ny fikorontanan'ny toetr'andro sy ny fiantraikan'izany ao amin'ireo nosy madinika ny mpiserasera Karaibeana. Manana fijery manokana momba ity olana ity ny bilaogera iray ao Guyana izay sady tsy azo sokajiana ho madinika no tsy nosy ihany koa, saingy azo antoka fa anatin'ny sisintanin'i Karaiba:
Manapotika fanomezana mampitolagaga, tsikelikely tena tsimoramora ny olona, efa misy ny sasany tsy mahita. Te hampiseho anareo ity zavatra mahafinaritra ity aho androany, Andro Iraisam-pirenena Hoan'ny Tontolo Iainana, ary manantena hanainga ireo olona hanadio ny tontolo iainana.
Nandefa sombiny tamin'izay nosoratany izy, izay maneho fomba fijery vaovao mikasika ny fanomezan-danja ny tontolo iainana:
9 Mey 2014: … tara-masoandro miposaka milokom-bolamena manazava ny ranomasina milokom-bolafotsy. Mamirapiratra amin'izany hakanto izany ny ranomasina, tsy afa-miditra ao amin'izany aho, tsy maintsy mijery any an-kafa aho.
20 Novambra 2013: Fa maninona no manahirana ahy izy ity, ny fahasalaman'ny tany, ny lanitra, ny ranomasina? Satria miankina amin'izy ireo ny fahasalamako. Tahaka izany ihany koa ny fahasalamanao sy ny zanakao.
13 Oktobra 2013: Taloha ry zareo nihazakazaka sy nilalao akaikin'ny ranomasina, eny an-tsaha malalaka, anaty ala. Inona ny holazain'ireo ankizy rahatrizay? Nitendritendry hiditra tany amin'ny tranonkala izahay?
5 Marsa 2013: Mihevitra izy ireo fa adala aho, vehivavy adala mangataka fahasalaman-tsaina. «Azafady, aza mampiasa odim-boalavo, famonoana ahi-dratsy, fa mandoto ranomasina izany, ao ny zavatra hohanintsika.
Nihevitra kosa i Labrish, Jamaikana am-pielezana sady bilaogera momba ny tontolo iainana fa mety ho hita amin'ny alalan'ny hai-toetra (eko-psikôlôjia) sy ny haintontoloiainana (ekolojia) lalina ny vahaolana hoan'ny fikorontanan'ny toetr'andro :
Manoloana ireo vaovao mampivarahontsana hitantsika isaky ny maraina mikasika ny voka-dratsin'ny fikorontanan'ny toetr'andro, ahoana no fomba hijoronatsika tsara, handrafetana saina amam-panahy, ny hozatry ny saina sy ny fihetseham-po hiatrehana izany, ary ho mpanohana ao anatin'ny fiarahamonintsika?
Nolazainy ny asan'i Joanna Macy, mpikatroky ny tontolo iainana sady mpanabe izay miezaka mampifandray indray ny olona amin'ny fiarahamonina misy azy, sy raha hitarina, amin'ny natiora.
Nanamarika izany andro izany ny bilaogy Barbadiana am-pielezana Bajan Reporter amin'ny famoahana indray ny fanambaran'i Mikael Barfod, Lehiben'ny delegasionan'ny Vondrona Eoropeana ao Barbada sy Karaiba Atsinanana, izay nanambaràny ireo fanamby atrehin'ny nosy kely raha resaka fampandrosoana maharitra – ara-toekarena sy ara-tontolo ianana.
Nilaza momba ny fijery Kiobàna iray mikasika ny Andro Iraisampirenena hoan'ny Tontolo Iainana ny Havana Times:
Ny tanjony dia ny hanao fanentanana momba ity olana saropady ity, izay tena mampidi-doza amin'ny fisian'ireo firenena madinika (izay mety ho lasa ambanin'ny haavon'ny ranomasina indray andro any). Maro amin'ireo faritra ao amorontsiraka Kiobana no mety hiharan'izany loza izany.
Nihevitra ilay bilaogera fa zava-dehibe hoan'ny olona ny mahafantatra fa «zavatra mandrafitra ny tontolo rehetra manodidina antsika ny tontolo iainana: ny tontolo voajanahary, ny rivotra iainantsika, ny rano sotrointsika, ny akora voajanahary ampiasaintsika ary ny fiarahamonina raha bangoina ho iray»:
Ao anatin'ny ezaka fanangonan-karena tsy mahay mionona, nosimban'ny olombelona ny tontolo iainana hany ka, raha mitohy izao fahazarana izao, dia tsy ho ampy intsony ireo harena voajanahary eto amin'ny planeta hitazona ny fiainan'olombelona rehefa afaka taona maromaro.
Eto no misy ireo sioka nampiasaina tao amin'ny Twitter mikasika ny ##World Environment Day
Avy amin'i Taran Rampersad ny sary nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity, nampiasaina tamin'ny alalan'ny Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons license. [lazaina ny tompony, tsy ampiasaina hahazoana vola, zaraina amin'izao endriny izao]. Tsidiho ireo sary ao amin'ny Flickr an'i Taran Rampersad.